Uchungechunge oluthi "Ulungiswe": kuzoba khona ukuqhubeka?
Ngemuva kwe-oda olusemthethweni yi-The CW inkampani yeziqephu ezintsha ze-movie ethandwa kakhulu, yaziwa ukuthi uchungechunge oluthi "Enchanted" mayelana nodadewabo abane bemilingo alwa nempi embi uzobuya futhi. Akukacaci ukuthi ubani ozodlala indima eyinhloko, kodwa umugqa wesigcawu unqunywe ukuhlala ungashintshi.
Kodwa-ke, owokuqala odadewabo besibukeli umlingisi uHolly Mary Combs uthe uhleli ngokumelene nalo. E-akhawuntini yakhe, umdlali we-actress ushicilele okuthunyelwe okubonisa ngokucacile ukucasuka kwakhe okwenzekayo. Kulo, waphendukela kubalobi bephrojekthi entsha.
Abathandi abakwazi ukukukhohlisa
Umdlali wesifazane wabhala lokhu okulandelayo kwi-Twitter yakhe:
"Into, kufanele usicele ukuba sibhale iskripthi esisha, njengoba uBrad Kern enza ngaphambi kweviki, kungenjalo ngeke uthole noma yini kusuka emsebenzini wethu. Ngoba, okokuqala, "UCharmed" nguyena wethu omncane, iqembu labalobi bombhali, bonke abadlali befilimu. Abalandeli bethu ngeke bakwazi ukukubamba, kuphela ngokuthatha umkhiqizo wethu. "
Kungani uNina Dobrev no-Ian Somerhalder beyingxenye?
U-Angelina Jolie wenza isimiso sokubhala nge-mini-dress ngemva kokuya emcimbini wokugcina abadlali
I-Dakota ne-El Fanning
Lesi simo siphuthumiswa yiqiniso lokuthi lapho uchungechunge lwalucacisiwe, ngo-2006 I-CW yenqabe ukuqhubeka nefilimu, nakuba izinkontileka zabadlali bezemidlalo abadlala indima yabodade zaphetha.
Oscar-2016: Uhlelo lokubonisa nabanqobile
Inkantolo ivimbele umsolwa ngobudlova uChris Brown ukuba asondele kuCarruci Tren
UCristiano Ronaldo wadalula umkhiqizo we-CR7
UBarbara Palvin noHaley Baldwin bavele emifanekisweni ephilile emakethe amasha wekhalenda LOTHANDO
U-Shakira wabonisa ukuzivumelanisa nezimo
U-Angela Merkel uchaze ukuthi kungani u-Ivanka Trump engena esikhundleni sikayise wakhe komunye wemihlangano emhlanganweni we-G20
UJohn Carney ucele ukuthethelelwa kukaKeira Knightley, owabekwa icala lokungasebenzi
Umlayezo wokufa uDolores O'Riordan
UJennifer Lopez noCasper Smart bahlukana, bahlala bengabangane
USharon Stone nabanye ohlonishwayo ebusuku kusihlwa sikaStephen Tyler
Inhliziyo yesithupha kaDavid Rockefeller imisiwe
UMiranda Kerr washaqeka ngemigomo yesivumelwano somshado nombhali wezigidi
I-Bekhati Prinslu kulo nyaka izoba ngumama wami
U-Britney Spears esembatho esincane esifushane waba yisivakashi somklomelo I-Hollywood Beauty Award-2018
Izikhwama zesikole zabafundi besikole esiphakeme
Ungasusa kanjani amathini kusuka kumdwebo kusuka ezingutsheni?
Kungenzeka yini ukuba udle ama cherry amnandi ngenkathi ulahlekelwa isisindo?
Amagilavu ​​avuthayo asebusika
Indlela yokugubha uNyaka Omusha e-Italy?
Imithi yendabuko yokulahlekelwa isisindo
I-Keratitis - Izimpawu Nezokwelapha
Ijackti yekwindla yabesifazane enehholo
Amabhontshisi ase-Stylish 2014
Usuku Lomhlaba Womhlaba
Isongo esenziwe nge-raber bands "Shnurki"
I-lipstick ye-liquid matt
Yini engenakunikelwa ngosuku lokuzalwa?